मलाई रुवाउने मान्छे - हेमन्त कान्छा रसाइली ( माया मार्यौ रे ) - NEPALI KALAKAR
एक त मरुभूमिको निर्दयी घाम अनि त्यो दिनको उखर्माउलो गर्मी । घाँटी सुक्यो, थोरै पानी पिउन मन लाग्यो । पानी तातेर पिउनै नहुने भारैछ । मुखमा हालेको पानी पनि ननिली थुकिदिए । साथीले खाना खाने ब्रेक भएको जानकारी दियो । टाउकोको हेल्मेट झिके, हातको पन्जा फुकालेर चोर औंलालाई बङ्गाएर निधारको पसिना पुछे । भोक बेसरी लाको छ तर गर्मीले बसाएको दाल र कक्रक्क परेको खबुस (रोटी ) देख्ने बित्तिकै खाने जाँगर कता भाग्यो कता । बालुवा माथि थचक्क बसेर लामो सुस्केरा हाल्दै दुई टुक्रा रोटी दालमा चोबेर मुखमा लैजानै लागेको थिए साथीले मोबाइलमा गीत बजायो :-
पातको चुङ्गी खेलिन्थ्यो बारीमा
ठेस लागेर सिस्नोको घारीमा !
आज ती बालापन कहाँ गए
ठुलो भासी के बन्छस् भन्थ्यौ आमा
गायक बन्छु भन्थे परदेशी पो भए !!!
यो गीत बजाउदै गीतको तालमा टाउको हल्लाउदै साथीले रोटी खादै थियो । मलाई भने खाउँ कि नखाउँ भयो । कस्ले लेख्यो होला यो गीत ? कस्ले गर्यो होला सङ्गीत ? अनि कस्को होला यो आवाज ? यस्तो लाग्थ्यो यो सर्जकले मलाई वर्षौ देखि पिछा गरेको छ अनि मेरो यथार्थ जीवनी गीत बनाएर गाएछ । कति मिल्दोजुल्दो छ मेरो जिन्दगीको कथा र यो गीत । सम्झिए मेरो गायक हुने अपूरो सपना अनि आज खाडीमा गर्नु परेको लेबर काम । दाल राखेको बट्टामा तप्प आँसु खस्दा पो थाहा भयो हिजोको कुराहरु सम्झिएर परेली रसाइसकेछन् । साथीले मुखमा लैजादै गरेको गास रोकेर भन्यो – “खाने बेलामा नि के के सोच्छस् यार ! चुपचाप खान” । भोक त लागेको छ नि तर न त खान लायक नै रह्यो त्यो खाना न त मन नै खानका लागि तयार भयो । आँखा वरिपरि मेरो बालापन घुम्न थाल्यो । स्कुलका कार्यक्रममा गीत गाएर सबैलाई रुवाइदिएको याद आयो । एक बजेको छुट्टिमा साथी भाइ जम्मा गरी टेवल ठटाएर गीत गाएको याद आयो । पार्वती म्याडमले आएर सबैलाई लस्करै उभाएर कान समाउन लगाएको पनि सम्झिए । सबैलाई घोप्टो परेर कुखुरा बन्न लगाउनु भयो तर मलाई सजाय स्वरुप यौटा गीत गाउन लगाउनु भयो । हो, त्यै दिन देखि मलाई लाग्थ्यो म गाउन सक्छु । हेमजा साहित्य प्रतिष्ठान बाट आयोजित लोकगीत कार्यक्रममा कहिल्यै असफल हुन परेन । गौरी शंकर क्याम्पसको प्राङ्गणमा बसेर गाएको दोहोरी नि सम्झिए । घरको कम्जोर आर्थिक अवस्था नै मेरो कम्जोरी बन्यो । अन्ततः आफ्नो गायक बन्ने सपना अधुरै छोडी खाडी आउन बाध्य भए ।
त्यै रात बेलुका रुम पुगेर युट्युबमा बालापन भन्ने गीत सर्च गरेर हेरेर । बल्ल थाहा भयो मलाई रुवाउने मान्छे त “हेमन्त कान्छा रसाइली” पो हुनु हुदो रैछ । वाह ! सर हजुरको यो सिर्जना मेरो जिन्दगीको सत्य र तितो कहानी हो । हजुरको यो अदृश्य शक्ति र यो यथार्थ अनि मौलिक गीतको म खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छु । आज भोलि हजुरका धेरै गीत सुन्न पाएको छु । “काँचो सुन्तला”, “बालापन”, “भाग्यमानी”, “किन होला खै” अनि भर्खरै बजारमा आएको नयाँ गीत “माया मार्यौ रे” । आज औपचारिक रुपमा अहिले भर्खर डिजिटल बजारमा भित्रिएको निकै मर्मस्पर्शी गीत “माया मार्यौ रे” का बारेमा केही शब्दहरु लेख्न चाहन्छु ।
मेरो नजरमा “हेमन्त कान्छा रसाइली”
सरल ब्यक्तित्व, मिजासिलो मान्छे । थोरै बोल्ने, हसिलो मान्छे । जति मिठो गायकी उति नै मीठो बोलीचाली । मान्छे उस्तै अनुशासित । सर्जक, गायक अनि सारङ्गी बादक । आधुनिक जमानाका युवा तर पौराणिक, लोपोन्मुख मौलिक बाजा सारङ्गीका संरक्षक । मात्र उनी सारङ्गी बजाउदैनन् ताकि बनाउछन् पनि । संघर्षको उपज अहिलेको सफलता र लोकप्रियता ।
“काँचो सुन्तला”ले मौलिक लोक सङ्गीतमा जन्माएको नामलाई “बालापन”ले सुनको जलप लगाएर चम्काइदिएको छ ।
केही दिन अघि मात्रै सार्वजनिक गरिएको नयाँ गीत “माया मार्यौ रे ” पनि उस्तै मीठो र मौलिक छ । बाध्यताले बिछोडिएका दुई प्रेमिल जोडीको गुनासो पोखिएको छ । खै कस्ले बनायो यो माया, अनि किन छुटाउछ माया गर्ने ब्यक्तिहरुलाई नै । इस्वरको यो परिक्षा कसैले बुझ्न सक्दैन । ती साच्चै भाग्यमानी हुन् जस्को प्रेम सफल भएको छ ।
माया मार्यौ रे
मेरो मुटुलाई घाइते पार्यौ रे !!
फुल हो जीवन फक्रिने ओइलिने
मायामा ज्यान कोहि दिने कोहि लिने !
जब भयौ सम्पर्क बिहिन
यो दिन आउला सोचेकै थिइन !!
मनलाई सोधे हैन कि भनेर
गयौ अरे पराइको बनेर !
मनले खोज्छ त्यै तिम्रो साथ
आँसु पनि खोसियो म बाट !!
मलाई धोका देकि छौ जसोरी
धोका देर बाँचौली कसोरी !
कति साह्रै मन तिम्रो निर्दय
मेरो जस्तै हैन र हिर्दय !!
आखिरीमा माटो मै मिल्नु छ
खरानी भै पानीमा *बिल्नु छ (बिलिन हुनु छ )
माया कस्तो बुझनै सकिन
छुट्ने साथ जोडिन्छ खै किन !!
शब्द / लय : हेमन्त कान्छा रसाइली
आवाज : हेमन्त कान्छा रसाइली, कमला पोखरेल, प्रेमा राना र गरिमा बिरही ।
नेपाली मौलिक लोकदोहोरी गीत “माया मार्यौ रे ” वास्तबमै यथार्थ र समसामयिक छ । हाम्रो कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने गीत हो यो । कमला पोखरेलको सुरिलो आवाजले गीतलाई अझ कर्णप्रिय बनाएको छ । जति सुन्यो उति सुनु सुनु लाग्ने यो लोकभाका सम्पुर्ण नेपालीका मन मुटु सम्म पुगोस् । मेरो सहृदय शुभकामना !!!
5 thoughts on “मलाई रुवाउने मान्छे – हेमन्त कान्छा रसाइली ( माया मार्यौ रे )”
रमाईलो बालापनको यथार्थता सम्झाउने गीत ..प्रिय कुमार का ति गहकिला शब्दहरुले झन सुनमा सुगन्ध थपिदियो…
साँच्चै मालई पनि मेरो बाला पन को याद आयो यो गीत ले र भाइ प्रिय कुमार को समालोचना साँच्चै मेरो पनि मन छोयो l भाइ प्रिय कुमार अझै धेरै यस्तै लेख हरू पढनै आशा राख्दैछु l
हेमन्त कान्छा दाइको गीत सबै सुनेकी छु । म त ठूलो फ्यान हो अझ त्यो बालापन गीत त कति राम्रो हो कति राम्रो ।